NINKII NABADA DIIDOW MAXAAD DIRIRTA KU OG-TAHAY??
Waxaan salaamayaa dhamaan inta nabada jecel ee Soomalinimadu dhabta ka tahay jecela in ay la soo laabtaan sumcadii iyo magacii qarankii Soomaaliyeed lahaa iyo goobtii aduunka uu kaga yaaley
Intaas hadaan kaga baxo xasuusinta aan u laabto ciwaanka anoo koobaya qoraalka isla markaasina hufaya cidna aan qardoofo u geysanaynin ee tay ka hadlaya war aniga degaan ahaan waxaan ka soo jeedaa Sool,Sanaag,Caynhawd,waxaan doonayaa midnimo Soomaaliyeed hadaan waayo halkaygaa Ilaah igu ogyahay lakiin waxaan ku dedaalayaa in aan ilaah amarkiisa helo midnimo Soomali-weyn waayo waa lagama maarmaan taasi.
Waxaan maalmahaan maqalayey maran ku saabsan degaankaas aan ka soo jeedo markaas oo ka imaanaya beesha deriska ah ee reer W/galbeed &Togdheer waxaan maqlayaa duulaan iyo daandaansi waxaan maqlayaa dardaro cadaan ah iyo dad la sheeganayo waa yaab!!!!!!!!! aduunka hadaad joogto oo ilaah kuu daayo wax walba waad aragtaa maqashaa ku soo maraan la yaabi maayo in beeli beel tidhaaho anagaa xukuna iyo waa anaga tusaale(Majeerteen iyo dhulbahante)waa dad wada dhashay oo haybta way wadaagaan oo waa wax iska cad lamana qarin karo waa yaabe!!!!! xagee naloo wadaa (Isaaq) waxaanu nahay ood wadaag lakiin isir wadaag ma nihin Soomaalinimo ayaa noo dhaxaysa waa khalad in ay maanta sheegtaan Degaan aan cida iska leh doonaynin.
Duulaanka marka aad qaadaysid waxaa la galaa meel aad is leedahay wax baa kaa soo gelaya lakiin waa dhibaato adoon wax hubin in aad col dirto waxaa kaa horeeyaa waa khasaare iyo Wiil dhinta dumar Goblama iyo Ogoon badata,ee kaama horeeyaan caano iyo nabad waxaan ku dhaafayaa qoraalka anoo kuwa kale soo qori doona waxaas beesha deriska iyo reer Hargeysa ha iska hubiyeen(NINKII NABADA DIIDOW MAXAAD DIRIRTA KU OG-TAHAY)